Hiran State - News: Jaaliyada reer Hiiraan ee qurbaha xildhibaanada ku sugan Hiiraan iyo saraakiisha oo wada hadlay.
Jaaliyada reer Hiiraan ee qurbaha xildhibaanada ku sugan Hiiraan iyo saraakiisha oo wada hadlay.
Hiiraan:-Tan iyo markii la mideyey ciidamada reer Hiiraan kuna midobeen hal magac oo ah xoogaga reer Hiiraan arintaasi oo ay ka shaqeeyeen xildhibaano dhawr sitimaan ka hor gaaray halkaasi ayaa waxaa bilaawday in qurbo joogtu ay hada u soo jeestaan iney xiriir la sameeyaan masuuliyiinta halkaasi ku sugan ee iskugu jirta xildhibaanada iyo saraakiisha ciidamada.
Xildhibaanda oo habeenkii xaleyto ahaa ay u hadlayeen xildhibaaanada kala ah Waare iyo Mitsubishi ayaa su,aalo dhawr ah oo la weydiiyey waxaa ka mid ahaa ujeedada socdaalkooda waxeyn yiraahdeen markii aanu xukumadii Farmaajo ka weynay iney gurmad la gaaraan ciidamda reer Hiiraan madaxweynahana dhawr jeer arintaasi agtiisa ka hirgali weysay ayaanu go,aansanay in aanu ciidamada dagaalka la galno oo aanu meel kula dhimano joogitaanka Mogdishona wax micno ah kuma fadhiyin maadama uusanba jirin baarlamaan shaqeynaya oo fadhiyo yeelanaya sidaasi daraadeed cid aad isku haleysaan amaba dowlad diyaar u ah iney ciidankaan dagalka ku jiro 2da sano anagii dowalda ku jirnay ayuu warkeena socon waayey marka adingey idiin taalaa hadaad gurmad la soo gaareysaan.
Intaasi kedib waxaa hadalka qaatay qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka oo ku nuux nuuxsaday ineysan u xayirmi doonin qof bini'aadam ah oo ay ka go,an tahay iney Hiiraan ka xoreeyaan kooxahan sharta isku baheystay. qurba joogta oo wadamo nabad ah ku nool ayaa mid ka mid ah dadkii telefonka ku jiray waxuu yiri yaa dhaqaalaha leydiinku soo hagaajiyaa oo la aaminayaa dabcan rag baa dhimanayo amaba dhaawac ah sidii Hiiraan loo xoreyn lahaa hadane badanaa qurbo joogtu badankood ma ahan wada xil kas amaba wadanka ayaa mar horey ugu danbeysay maadama ay nabadi ka jirto ku nool yahiin waxey doonaan ayey iskaka hadlaan.
Kedibna waxaa u jawaabay oo hadalka qaatay mid ka mid ah saraakiisha ciidanka oo aanu u maleyneyno inuu ahaa Dabageed waxuuna yiri adeerayaalow hadaad waxa aad noo soo wacdeen ay tahay inaad Hiiraan nala xoreysaane welcome hadi kale adingaa na soo wacdee inta leydiin sheegay ayaa Hiiraan ka jirto xildhibaano, saraakiil, iyo ciidanba waxaa naga go,an in aanu dhulkeena xoreysano ee waqtiga ha iska dilina hadaad ciidanka soo caawineysaan waxii aad u heli kartaan hadey af aheydna intas ha inoo joogto hadii ay gurmad ahedna walaalo jira.
Intaasi kedib waxaa isku haray qurbo joogtii kedibna waxaa leysla gartay in ciidamda gurmad deg deg ah lala gaaro iyadoo lagu balamay in wadan wadan leysku abaabulo si loo caawiyo ciidanka oo hada u muuqda kuwo ku midoobay xoreynta Hiiraan. waxaana lagu wadaa in hada kedib si joogto ah loo caawiyo ciidanka oo dhaqaalo cayiman ay dad kooban iska qaadaan inta Hiiraan lag axoreynayo.
Dul mar guud dagaaladii ugu danbeyey ee Hiiraan ka dhacay.
Markaan dhinackasta ka eegnay dagaaladii ugu danbeyey guulo la taaban karo ayey ka keeneen ciidamda xoogaga reer Hiiraan dagaalkaasi waxaana meelo badan ilaa hada yaala meydka Shabab. sidoo kale Shabaab ayaa labo dhalinyaro ah oo ay iyagoo careysan ka qabteen meel magaalada Belet weyne banaankeeda ah qoorta ka jaray kedib markii ay dagaaladii ugu danbeyey ku waayeen rag badan Hees iyo duleedka Beletweyn.
Sidoo kale inta badan jidadkii ay isticmaali jireen ciidamada Shabaab ayaa la dhigay dhalinyaro taasi oo dhabarjab ku noqotay isku socodkii kooxda argagixisada ah ee Shabaab. hadii ay qurbo joogta gurmadyo si xig xiga la gaaraan cidanka sida ay qaarkood habeenkii xaleyto aheyd balan qaadween si deg deg ah ayaa cadowga ku soo duulay dalkeena ee Shabaab iyo xulufadooda looga guuleysanayaa. qurba joogta oo horey u diiday iney gurmad iyo kaalmo u diraan dagaalka Hiiraan inta lag ahelayo ciidamo mideysan aya hada u muuqda iney wax badan iska bedeleen fikirkoodii hore maadama ay habeenkii xaleyto aheyd la hadleen rag awal iska soo horjeeday oo meel wada jooga oo hal meel wac ku wada cunaya oo intooda badan ahaa saraakiishii ciidanka Hiiraan hogaamin jiray oo midkasta magac kooxeed shegan jiray.
La soco wararkeena danbe iyo dagaalada ay Hiiraan ka wadaan ciidamda mujaahidiinta Hiiraan amaba xoogaga reer Hiiraan.
· admin on June 19 2011 13:17:18 · 0 Comments · 1730 Reads ·
14,613,427 unique visits